Herinandro fiaraha-mivavaka 2021 - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fanao isan-taona ny manokana ny datin’ny 18 ka hatramin’ny 25 janoary ho herinandron’ny fiaraha-mivavaka. Ny 17 ka hatramin’ny 24 janoary 2021 kosa no nanatanterahana ny teto Fianarantsoa. Nanombohana azy ny tao amin’ny “Aumônerie Hopitaly” Tambohobe, ny alahady 17 janoary 2021. Namaranana azy kosa ny 24 janoary 2021, tao amin’ny Paroasy Maria Manjaka Talatamaty. Lohahevitra noraisina ny hoe: “Mihavana amin’ny zavaboary rehetra”. Nanampy tamin’ny fandalinana izany ny tenin’ny Soratra masina, Joany 15:11 “Mba ho aminareo anie ny hafaliako ary mba ho feno anie ny hafalianareo”, sy ny Kolosiana 1,15-20 “Ao aminy no aharetan’ny zavatra rehetra”
“Ezaka iraisan’ny mpino Kristianina ny Ekiomenisma, araka ny vavaka nataon’i Jesoa tamin’ny alakamisy Masina”, hoy ny Presbitera Rakotomalala Odilon, avy ao amin’ny Fiangonana Anglikana. Tsinjon’i Jesoa manko fa nisy ny fikononkononana fisarahana teo amin’ny mpianany. Koa nivavaka tamin’ny Rainy izy ho azy ireo. Izany indrindra no ambaran’ny Evanjelin’ny Md Joany 17, 21: “Mba ho iray ihany anie izy rehetra”. Vavolombelona ho an’ny Kristianina, araka izany, fa tonga hampihavana i Jesoa. Tsy mba nanavakavaka izy fa namela heloka. Fanenjehana avy amin’ny mpanohitra Azy anefa no vokatr’izany. Koa natao sorona tamin’ny hazo fijaliana Izy. Io ilay Hazofijaliana mampihavana ny olombelona amin’Andriamanitra. Fampihavanana tena hita maso, mampifandray ny atsinanana sy ny andrefana. Mampihaona ny avaratra sy ny atsimo na dia ao anatin’ny fahasamihafana aza.
Sehatra anehoana ny fomba ifandraisana amin’ny alalan’ny vavaka sy ny fiaraha-mivavaka kosa ny F.F.K.M. Natao mba hahafahana mifankahalala bebe kokoa amin’ny maha fiombonana kristianina azy. Sehatra ifampizarana ny mahasoa sy ifanoroana hevitra. Efa efapolo taona tokoa manko izao ny nijoroan’ny F.F.K.M. Nisongadina tamin’izany sady mbola tsy hadino ny fanentanana nataon’ny Papa Joany Paoly faharoa, raha nanambara ny Ekiomenisma ao anatin’ny F.F.K.M izy, ny taona 1989 fa:”I Jesoa Kristy ihany no fototry ny firaisantsika sy ahafahantsika miray amin’Andriamanitra ary iraisantsika samy isika”
Misy toe-tsaina ekiomenika tokony hananana. Mialoha lalana hatrany io toe-tsaina io ny finoana mba tsy ho ny toe-tsaina no hibaiko ny finoana. Ilaina koa ny fifankatiavana sy ny fifandeferana ary ny fifanajana ao anatin’ny fahasamihafana. Izany hoe: manana ny toe-panahy araka an’Andriamanitra. Tsy ambakan’izany ny fampitam-baovao marina sy tsara fa tsy mampiely tsaho na ny honohono. Ampanjakaina ny fifampihainoana. Mahay mifamela heloka amin’ny fiainana andavanandro. Takiana ny fandraisana andraikitra fa tsy mifampiandry lava. Resena ny tahotra fanenjehana na dia hihatra aman’aina aza. Mila sahy miady hevitra anatin’ny fahasamihafana koa mba hialana amin’ny fihatsaram-belatsihy. Misokatra amin’ny olon-drehetra fa tsy mora sosotra. Tia fihavanana ka manaiky ho tarihin’ny Fanahy Masina.
Asa ekiomenika tanterahina miaraka ny fitoriana ny TeninAndriamanitra. Tsy ny hiditra ao anatin’ny F.F.K.M no tanjona mahamaika fa ny famporisihana ny olona hamonjy fiangonana. Omena lanja ny fanabeazana ny maha olona izay hita fa mihen-danja ankehitriny. Marihina fa natao tamin’izao famaranana ny fiombonam-bavaka izao koa ny famindram-pitantanana amin’ny fitarihana ny fikambanana. Nahavita ny anjarany i Pastora Randrianambo Ny Valiha, avy amin’ny F.L.M. Mandimby azy kosa i Mompera Randrianasolo Charles Arsène, avy amin’ny E.K.A.R.
Mandeha ny feo fa manao Politika ny F.F.K.M. “Politika fanasoavana ny mpiray tanàna sy ny mpiara-monina no imasoanay”, hoy ny Presbitera Odilon. Nohamafisiny fa tsy mitambatra amin’ny vondron’olona mikatsaka tombontsoa manokana handrombahana fahefana ny F.F.K.M. Entanina koa, ny lahika mba tsy ho voasarika amin’ny politika maloto.